प्यारासिटामोल बिरालोलाई दिन सकिन्छ? | Noti बिरालाहरू
के प्यारासिटामोल बिरालोलाई दिन सकिन्छ?
हामीलाई थाहा छ कि बिरालोले आफ्नो जीवनभर असंख्य विकृतिहरू भोग्न सक्छ। तिनीहरू मध्ये केही निदान गर्न सजिलो हुन्छ, किनकि उनीहरूले प्रस्तुत गरेका लक्षणहरू हामीसँग कहिलेकाँही जस्तै छन्। यस कारणले गर्दा, त्यहाँ त्यस्तो व्यक्ति छन् जुन उहि बेरोजगारको लागि निर्धारित औषधि दिने निर्णय गर्छन्।
यो एक खतरनाक बानी हो जसले जनावरको जीवनलाई जोखिममा पार्न सक्दछ, किनकि यद्यपि हामीसँग त्यस्तै रोग भएको थियो, शरीर फरक छ। त्यसो भए, यदि तपाईं तपाईंको बिरालो प्यारासिटामोल दिन सक्नुहुन्छ भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने, उत्तर होईन। यहाँ हामी किन व्याख्या गर्छौं।
1 प्यारासिटामोल के हो?
2 बिरालाहरुमा प्यारासिटामोल विषाक्तता
3 बिरालाहरू र उपचारमा विषाक्तताको लक्षण
4 के म मेरो बिरालोलाई प्यारासिटामोलको सानो डोज दिन सक्छु?
5 किन यति विषाक्त छ?
6 यदि मेरो बिरालोले गल्तिले प्यारासिटामोल इन्जेष्ट गरेको छ भने मैले के गर्नुपर्ला?
7 यदि तपाईंको बिरालोले पेरासिटामोल इन्जेस्ट गरेको छ भने पशु चिकित्सकले के गर्छ?
8 यदि मेरो दुखाइ दु: खमा छ भने म के दिन सक्छु?
प्यारासिटामोल के हो?
प्यारासिटामोल एक विरोधी भड़काउने र एन्टिपायरेटिक औषधि हो (यसले ज्वरोको खण्डमा शरीरको तापक्रमलाई कम गर्दछ) यदि विषाक्त छ भने सिफारिश गरेमा अधिक मात्रामा लिईन्छ। यदि यस्तो भयो भने कलेजोमा गम्भीर क्षति हुन सक्छ। तसर्थ, तपाईंले कहिले पनि बिरालोलाई प्यारासिटामोल (वा कुनै अन्य पशुचिकित्सक बिना सल्लाह) दिनुहुन्न।
यस औषधिप्रति उनीहरूको संवेदनशीलता धेरै महान् छ, कुकुरहरू भन्दा बढी, त्यो कुराको लागि3र १२ घण्टा पछि नशाको लक्षणहरू देखाउन सुरू गर्दछéइन्जेसन को s। यदि तपाईंले पशु चिकित्सा उपचार प्राप्त गर्नुभएन भने, तपाईं यसलाई पचाए पछि २ to देखि hours२ घण्टा भित्र मर्न सक्नुहुनेछ।
बिरालाहरुमा प्यारासिटामोल विषाक्तता
यद्यपि यो सत्य हो कि हामी हाम्रो बिरालाहरू आफ्नो परिवारको भागको रूपमा सोच्दछौं, स्वास्थ्यको हिसाबले तिनीहरू हामी जस्तो छैनन्। यो सत्य हो कि हामी उनीहरूसँग धेरै चीजहरू साझेदारी गर्दछौं: हाम्रो प्रेम, हाम्रो घर र कहिलेकाँही हामी के खाउँदछौं। हाम्रो जीवन बिरालाहरूसँग बाँड्नु एकदम इनामदायी छ, हामीले गर्ने सबै कुरा हाम्रा बिरामी साथीहरूसँग साझेदारी गर्न सकिदैन।
यो प्यारासिटामोल संग हुन्छ। यो औषधि कुनै पनि घरमा छ किनभने यो नियमित रूपमा मानिसहरू (वयस्कहरू) द्वारा टाउको दुखाइ वा मांसपेशि दर्दको लागि लिन्छ। तर यो औषधि बिरालाहरूमा एकदमै विषाक्त छ र केवल एउटा गोलीले यसलाई मार्न सक्छ, यो यो हो कि तपाईंले यसलाई विष दिइरहनुभएको थियो।
बिरालाहरू र उपचारमा विषाक्तताको लक्षण
यदि तपाईंको बिरालोले प्यारासिटामोल इन्जेस्टेड गरेको छ भने, तपाईंले यी लक्षणहरू अवलोकन गर्नुहुनेछ: कमजोरी, बान्ता, पखाला, डिप्रेसन, बैजनी वा निलो म्यूकस झिल्लीको विकृति, अत्यधिक झुकाव, सास फेर्न समस्या र / वा दौरा।
यसैले, यदि तपाईंलाई थाहा छ कि उसले लिइसकेको छ, वा तपाईंलाई शंका लाग्छ कि ऊ त्यो छ, तपाईंले उनलाई सकेसम्म चाँडो पशु चिकित्सकमा लैजानु पर्छ। त्यहाँ एकचोटि, कुनै पनि बाँकी औषधि हटाउनको लागि उनीहरूले पेटको दायाँपना गर्छन्।
के म मेरो बिरालोलाई प्यारासिटामोलको सानो डोज दिन सक्छु?
सं प्यारासिटामोलको कुनै पनि खुराकले तपाईंको बिरालालाई मार्न सक्छ, किनकि विषाक्तताको डिग्री एकदम कम खुराकको साथ छ। बिरालाहरुलाई दिन को लागी प्यारासिटामोल को कुनै सुरक्षित खुराक छैन। कुनै पनि हिसाबले तपाईंले बिरालालाई यस प्रकारको औषधि दिनु हुँदैन र पनि, यो आवश्यक छ कि तपाईंले यसलाई अन्जानमा यसलाई लिनबाट रोक्न उनीहरूको पहुँचबाट टाढा राख्नु आवश्यक छ।
किन यति विषाक्त छ?
बिरालाहरूको शरीरमा एसिटामिनोफेन तोक्न आवश्यक एन्जाइम हुँदैन, त्यसैले यो सुरक्षित छैन। साथै, यदि तिनीहरूले यसलाई सम्मिलित गरे, तिनीहरूले आफ्नो शरीर भित्र खतरनाक यौगिकहरू गठन गर्न सक्छन्। तपाईको रातो रक्त कोशिकामा असर पर्ने थियो र तपाईको शरीरमा अक्सिजन राम्रोसँग सर्कुलेट हुँदैन। थप रूपमा, प्यारासिटामोल यौगिकहरूले तपाईंको कलेजोलाई विफल बनाउन थाल्छ, जसले धेरै गम्भीर र खतरनाक कलेजो बिग्रन्छ।
यदि मेरो बिरालोले गल्तिले प्यारासिटामोल इन्जेष्ट गरेको छ भने मैले के गर्नुपर्ला?
यदि तपाईंले आफ्नो बिरालोलाई एसिटामिनोफेन दिनुभयो वा सोच्नुहोस् उसले यो गल्तिले लिएको छ भने तपाईंले त्यसलाई तत्काल पशु चिकित्सा अस्पतालमा लैजानुपर्नेछ। समय बितेमा यस औषधिले गर्दा भएको विषाक्तताको उपचार गर्न आवश्यक छ।
भोलिपल्ट बिहानसम्म पर्खनुहोस् यदि यो रातमा भएको छ भने, समय जुन तपाईंको बिरालाको लागि घातक हुन सक्छ। तसर्थ, यदि पशु चिकित्सा कार्यालय बन्द छ, तपाईंले २ 24 घण्टा वा आपतकालीन पशु चिकित्सा अस्पतालमा जानु पर्छ तत्काल उपचारको लागि।
यदि तपाईंको बिरालोले पेरासिटामोल इन्जेस्ट गरेको छ भने पशु चिकित्सकले के गर्छ?
यदि तपाईंले आफ्नो बिरालोलाई सकेसम्म चाँडो पशु चिकित्सकमा लगिसक्नुभयो किनभने उसले प्यारासिटामोल इन्जेस्टेड गरेको छ भने, तपाईंको पशुचिकित्सकले तपाईको बिरालोलाई सुस्त पार्नेछ र तपाईलाई बिरालोलाई उसको शरीरमा बढी प्यारासिटामोल लिनबाट रोक्न औषधी दिनेछ।। हामीले माथि उल्लेख गरिसक्यौं, पेट प्याज आवश्यक हुनेछ।
तपाईंलाई IVs र अन्य सहयोगी हेरचाह पनि दिइन्छ जस्तै अक्सिजन वा रगत स्थानान्तरण। थप विषाक्त बिघटन रोक्न मद्दतको लागि एसिटाइलसिस्टमिन दिनुहोस्। दुर्भाग्यवस, यदि तपाईंको बिरालोले पहिले नै प्यारासिटामोल विषाक्तताका लक्षणहरू देखाउँदछ भने, यो अझै पनि पशु चिकित्सा देखभालको साथ मर्न सक्छ ... यसैले उनीहरूलाई यस प्रकारको औषधीबाट टाढा राख्नु र घातक नतिजाबाट बच्न यसको खतराको बारेमा सचेत रहनु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ।
यदि मेरो दुखाइ दु: खमा छ भने म के दिन सक्छु?
यदि तपाईंलाई लाग्छ तपाईंको बिराला दुखिरहेको छ वा खराब स्वास्थ्यमा छ भने, तपाईं सकेसम्म चाँडो आफ्नो पशु चिकित्सक जानु पर्छ। यस तरीकाले, तपाईं आफ्नो बिरालाको जाँच गर्न सक्षम हुनुहुनेछ र यसको उपचार कसरी गर्ने जान्नुहोस्।
केवल तपाइँको पशु चिकित्सकले बिरालाहरूका लागि सुरक्षित पीडा रिलीभरहरू लेख्न सक्छ। यो रोगको प्रकार र तपाईंको पाल्तु जनावरको विशेषताहरूमा निर्भर गर्दछ। तर कहिले पनि, कुनै परिस्थितिमा तपाईंको बिरालालाई मानव औषधि दिनुहोस् (न त वयस्क हो न बच्चाहरू)।
जे भए पनि, यो जहिले पनि पशुचिकित्सक हुनेछ जसले बिरालालाई कस्तो प्रकारको औषधि दिने भन्ने निर्णय गर्दछ, राशि र समय तपाइँले यसलाई कसरी प्रशासित गर्नुपर्दछ र कसरी। कहिले पनि, कुनै पनि परिस्थितिमा, आफ्नो पाल्तु जनावरलाई औषधी नदिनुहोस् किनकि कसैले तपाईंलाई यो राम्रो हो भन्यो, किनभने तपाईंले यसलाई कतै पढ्नु भएको छ, वा किनभने तपाईंलाई कसैले सम्झना गराउँदछ कि यो राम्रो विचार हो।
अहँ, यदि तपाईंको पालतु पशु राम्रो छैन भने वा तपाईंलाई लाग्छ कि उसले कुनै प्रकारको दुखाइ छ भने तपाईले उसलाई पशु चिकित्सक समक्ष लैजानु पर्छ र तपाईको घरपालुवा जनावरको बिरामीको प्रकार अनुसार कुन औषधि दिन सकिन्छ भनेर पेशेवरले निर्णय गर्न दिनुहोस्। उसको लागि निर्णय नगर्नुहोस्।
कुनै पशु चिकित्सकको परामर्श बिना कुनै बिरालाको औषधी नदिनुहोस्। केवल उसलाई थाहा हुन्छ कि हामी कुनलाई उसलाई दिन सक्छौं र कुन खुराकमा।
लेखको पूर्ण मार्ग: Noti बिरालाहरू » बिरालाहरू » जिज्ञासा » के प्यारासिटामोल बिरालोलाई दिन सकिन्छ?
किन मेरो बिरालोको पिन्टि। छ
गँड्यौला भनेको के हो?